TSINDRY HAZOLENA : Nidoboka am-ponja ny ben’ny tanànan’ i Malaimbandy teo aloha
Mihatra hatrany ny fampiharana ny lalàna amin’ireo mihevi-tena ho tsy matimanota. Tsy misy fizahana tavan’olona ny fanasaziana fa izay nanao tsy nety teo amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana dia azo enjehina avokoa. 10 février 2020
Ny faran’ny herinandro lasa teo, naiditra am-ponja vonjimaika ny ben’ny tanànan’ny Kaominina ambanivohitra Malaimbandy, ao anatin’ny Distrikan’i Morondava teo aloha niaraka tamin’ny lefiny izay mpiara-miasa akaiky taminy. Araka ny vaovao voaray dia anisany vesatra niampangana azy ny fanamparam-pahefana sy ny tsindry hazolena nataony tamina mpandraharaha tao an-toerana. Ity farany izay voalaza fa tsy nanaiky ny hiara-dia taminy sady tsy nanaiky nanaraka ny baikony nandritra ny fotoana naha ben’ny tanàna azy, ka dia nanamparany ny fahefana nananany.
Niainga tamin’ny fitarainana voarain’ny Zandarimariam-pirenena tao Malaimbandy no nanaovana ny fanadihadiana ka nahafahana nanenjika azy. Voalazan’ny mpitandro filaminana nandray an-tanana ny raharaha fa efa nitsoaka ny Faritra Menabe ity ben’ny tanàna teo aloha ity no nosamborina. Tany amin’ny Kaominina antsoina hoe Morafenobe ao anatin’ny Distrikan’i Mandoto no nahatratrarana azy, voasambotra niaraka taminy ihany koa ny lefiny izay voasaringotra niaraka taminy ao anatin’ity raharaha ity.
Ny zoma hariva lasa teo no natolotra ny fampanoavana tao Menabe izy roa lahy ary avy hatrany dia niara-notazomina am-ponja vonjimaika. Araka ny vaovao voaray hatrany dia mbola misy antontan-taratasy hafa mikasika ny Kaominina Malaimbandy tamin’ ny fe-potoam-piasany ihany koa no arahin’ny Birao mahaleo tena misahana ny ady amin’ny kolikoly (bianco) akaiky amin’izao fotoana izao.
Karohina hatrany Marovoay ilay lehilahy hita nitondra farany ilay zaza RAHARAHA FAMONOANA AN’I ADRIANA (230) 4 août 2020 Mpiara-miasa akaiky amin’ny Governora miteraka resabe FARITRA ANALANJIROFO (111) 4 août 2020 Nahitana fihenana tato anatin’ny roa andro nifanesy TRANGA VAOVAO CORONAVIRUS (97) 4 août 2020 Manaja ny fanapahan-kevitry ny Governora ny Depioten’i Mananjary FANESORANA OLONA AMBONY (90) 4 août 2020 Nitsinjo ireo sahirana teny Marais Masay ny Filoha mivady FIDINANA TAMPOKA (41) 4 août 2020 Tokantrano 7 800 nahazo tohana avy amin’ny Fitondram-panjakana ANTANANARIVO RENIVOHITRA (22) 4 août 2020